Na Na Na Na - ysmụ nwoke --hụnanya - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
On My Own nkezi 4.9 / 5 si 9
NA / A, o nwere ihe nlere 15.4K
Genius siri nri na onye nwe ụlọ nri Heemin kpọrọ asị ịtụkwasị ndị ọzọ obi nke na akpọrọ ya “Maazị. Na Onwe M ”. N'ịbụ onye a maara dị ka onye na-adịghị mma, onye ọ bụla na-elebara anya dị mma n'ebe ọrụ, ọ gwụla ma ọ pụtara na ọ ga-ezobe akụkụ dị mkpa nke onye ọ bụ… Eziokwu ahụ na ọ bụ onye na-anụ ọkụ n'obi nke ndị otu K-pop, Mmetụta! Iji kọwaa, Heemin nwere mmasị na Jeong-woon, mana na nzukọ-na-ekele, otu n'ime ndị otu ndị ọzọ, Yiyeon, na-akparịta ụka ya. Enweghị ohere maka # 1 ọzọ na obi Heemin… ma ọ bụ ebe ahụ?
Chapter 38 Nwere ike 4, 2021
Chapter 37 Nwere ike 4, 2021
Mechie anya gi
Yoù Bụ Onye Iro?